रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन ः गभर्नर नेपाल - Internet Khabar
रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन ः गभर्नर नेपाल
September 3, 2017 September 3, 2017 Internet Khabar
पाल्पा, १८ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा आफैँ उद्यमी बनेमा मुलुकमा समृद्धि हुने बताउनुभएको छ ।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको छहरामा आज सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.को उद्घाटनमा गभर्नर डा. नेपालले मुलुकभित्र प्रशस्त आम्दानीको अवसर रहेकाले स्वदेशमा नै केही काम गरी स्वरोजगार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण लगानी गरेर आर्थिकरुपमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो । विदेश गएर अरूको नोकर भएर कामगर्ने प्रवृत्ति त्याग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
डा. नेपालले काम गर्नेका लागि देशमै ठूलो अवसर रहेको बताउनुभयो । सरकारले जनताका घरदैलोमा बैंकमार्फत पैसा लिएर आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार, व्यवसाय गर्नुहोस्, देशमै राम्रो अवसर छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा लगानी गर्न आतुर रहेकाले अहिले पैसा नभएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाईएन भन्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रासस
तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यसरी जोड्नुस् धनसम्पत्ति
यस्तो अवस्थामा जन्मन सक्छ, रोगी बच्चा
द्रुत मार्गका लागि भारतसँग सहयोग नमाग्न नयाँ शक्तिको आग्रह
भारतीय राष्ट्रपतिबाट प्रम ओलीको जन्मदिनमा उपहार
February 20, 2016	 0	सात महिनाकी नाबालिका जेलमा
‘बागी’ उम्मेदवारी दिनेलाई एमालेले भटाभट कडा कारबाही गर्दै
ओलम्पिकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने भारतीय महिला खेलाडीले हिराको हार पाउने
नेपाललाई गरिएको नाकाबन्दीलाई लिएर भारतको संसद् अवरुद्ध गर्ने तयारी
इनार सफा गर्ने क्रममा दुई जनाको मृत्यु
भारतीयले मदिरा खाएर होहल्ला गरेपछि सीमा क्षेत्रका अवैध मदिरा पसल बन्द
टर्कीमा सैनिक ‘कु’ प्रयासपछि भएको झडपमा एक सय एकसठ्ठी जनाको मृत्यु, चौध सयभन्दा बढी घाइते
आज घट्यो कि बढ्यो सुन-चाँदीको मूल्य ? हेर्नुहोस् बजारभाउ
भारतको झारखण्डमा प्रहरीको गोलीबाट चार गाउँलेको मृत्यु, १२ जना घाइते